တရုတျသညျ သံလိုကျဓာတျပါရှိသညျ့ Plasma အမွှောကျကို တညျဆောကျနကွေောငျး အခိုငျအမာပွောဆိုထားပါတယျ၊
တရုတျစဈတပျသညျမကွာသေးမီက လြှပျစဈသံလိုကျသနေတျကဲ့သို့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲ နိုငျငံမြားတှငျ အသုံးပွုနကွေသော ယမျးအစား သံလိုကျဓာတျကိုအသုံးပွုသညျ့ လကျနကျတဈခုတီထှငျရနျသုတသေီမြားအားဖိတျချေါသညျ့ပေးစာတဈစောငျကိုထုတျဝခေဲ့ပါတယျ၊သို့ပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ လြှပျစဈသံလိုကျသနေတျဟာ လကျနကျအရှယျအစားကွောငျ့ အဟနျ့အတားဖွဈစပွေီး Mach 7ထကျ အရှိနျမြားတဲ့ အမွှောကျဆနျကို တှနျးကနျနိုငျဖို့ လြှပျစှမျးအငျ အမြားအပွားလိုအပျပါတယျ၊
ဥပမာ နှဈပေါငျးမြားစှာ သုတသေနလုပျပွီး ငှပေမာဏ အမြားအပွားအသုံးပွုလကျြရှိတာတောငျ စဈသင်ျဘောတှမှော တပျဆငျဖို့အတှကျ အခှငျ့အလမျးနညျးပါတယျ၊ဒါပမေယျ့ တရုတျသိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့ ၎င်းငျးလြှပျစဈသံလိုကျသနေတျဟာဆိုရငျ ပေါ့ပါးပွီး တငျ့ကားမြား၌တပျဆငျရနျ စှမျးအငျလုံလောကျမှုရှိလိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျလကျြရှိပါတယျ၊
လြှပျစဈသံလိုကျသနေတျ အတှကျ လညျပတျရေးစနဈနဲ့ သီအိုရီအရ စမျးသပျမှုပွုရနျ တငျဒါဖှငျ့ ‌ဖိတျချေါကွောငျး တရုတျ နိုငျငံပိုငျ Global Time သတငျးစာမှာကွညောထားပါတယျ၊ “လကျနကျဟာ သိပ်ပံ ရုပျရှငျတှထေဲကနဲ့ တူညီပမေယျ့ စှမျးအားမွငျ့ Plasma လကျနကျမဟုတျပဲ၊ အလှနျမွနျဆနျတဲ့ အမွောကျဆနျဖွဈပါတယျ”
ဒါပမေယျ့ သံလိုကျ Plasma အမွှောကျဟာ ဘယျလောကျတိတိကကြ လုပျဆောငျနိုငျသလဲ ?
Global Time ကတော့ တရုတျခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ Google မှာရှိနတေဲ့ မူပိုငျခှငျ့ဟာကို ဖျောပွထားပါတယျ၊ ဒါကတော့ မူပိုငျခှငျ့နဲ့ပတျသတျတဲ့ စာဖွဈပါတယျ၊
“ယခုတီထှငျမှုဟာဆိုရငျ သံလိုကျPlasma အမွှောကျဖွဈပါတယျ၊ သံလိုကျစကျကှငျးကို အမွှောကျကိုယျထညျပိုကျအတှငျးမှာ စီစဉျထားပွီး သံလိုကျစကျကှငျးရဲ့ ဦးတညျခကျြသညျ အမွှောကျကိုယျထညျကို လိုကျ၍ ဝငျရိုးအတှငျးနံရံမှ သံလိုကျစကျကှငျးအား တဖွညျးဖွညျး လြော့နညျးလာပါတယျ၊ ပိုကျအတှငျးမှ ဂတျဈမြားသညျ ပိုငျးအတှငျး Plasma အလှာ အဖွဈကူးပွောငျးပွီး အပူစီးကူးမှုကို ကာကှယျပေးပါတယျ၊ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ အမွှောကျပိုကျအတှငျး ဖွာထှကျအငျအား လြော့နညျးသှားပွီး ကညျြ ထှကျရနျ တှနျးအားက တိုးလာခဲ့ပါတယျ၊အပူခံနိုငျရညျလညျးတိုးလာပွီး လုပျဆောငျမှုသကျတမျးလညျးတိုးလာမှာဖွဈပါတယျ”
တနညျးအားဖွငျ့ဆိုလြှငျ သံလိုကျ Plasma အမွှောကျဟာ ပါးလှာခွငျးနဲ့ အပူဒဏျကိုကာကှယျပေးပွီး အရှိနျပွငျးပွငျးနဲ့ပွဈခတျနိုငျပါတယျ၊
တရုတျစဈတပျလလေ့ာသုံးသပျသူ Wei Dongxu ကနညျးပညာသဈဟာ“ ၁၅၅ မီလီမီတာအလိုအလြောကျမောငျးသူမဲ့လယောဉျရဲ့ ပဈအား ကို ၃၀ မှ ၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၉ မိုငျမှ ၃၁ မိုငျ) အထိ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ(၆၂ မိုငျ) အထိတိုးခြဲ့နိုငျမယျ”ဟုပွောကွားခဲ့ပါတယျ၊ Plasma အလှာသညျ သနေတျပွောငျးနှငျ့ကညျြမြားအကွားပှတျတိုကျမှုကိုလြှော့ခနြိုငျပွီးလကျနကျကိုပိုမိုတိကစြပေါတယျ၊”
South Florida တက်ကသိုလျ ရူပဗဒေဂုဏျထူးဆောငျပါမောက်ခ Dennis Killinger က ၎င်းငျးစိတျကူးသညျ“ စိတျကူးကဖွဈနိုငျ‌ ခရြှေိတယျ” လို့ National Interestကိုပွောကွားခဲ့ပါတယျ၊ “ကြှနျ‌တျောရဲ့ အဓိကမေးခှနျးမှာPlasma ၏သကျတမျးသညျ ဘယျလောကျကွာရှညျခံသလဲ ဆိုတာနဲ့ ၎င်းငျး သနေတျအတှငျးမှလှတျတငျမှုအတှကျ လုံလောကျမှုရှိပါသလား။ “
၎င်းငျးသညျ Railgun နှငျ့မတူသောခဉျြးကပျမှုတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ၊ရိုလာကိုစတာအသဈတှမှော အသုံးပွုတဲ့လီဗာ ကဲ့သို့ မျောတာကို Railgun မှာ အသုံးပွုတာကွောငျ့ ယခု နညျးလမျးဟာ Railgun နညျးစနဈဟောငျးရဲ့အခှဲ တခုဆိုတာကို သငျတှေးနိုငျမယျလို့ မထငျပါဘူး၊ခုနညျးလမျးအသဈဟာဆိုရငျ မူပိုငျခှငျ့ရ နညျးလမျးဖွဈပွီး သနေတျပွောငျးကိုအသုံးပွုနိုငျဖို့ သံလိုကျစကျကှငျးကို အသုံးပွုရပါတယျ၊”
Translator : Evelyn
သံလိုက် Plasma အမြှောက်ကိုတီထွင်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ
တရုတ်သည် သံလိုက်ဓာတ်ပါရှိသည့် Plasma အမြှောက်ကို တည်ဆောက်နေကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်၊
တရုတ်စစ်တပ်သည်မကြာသေးမီက လျှပ်စစ်သံလိုက်သေနတ်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုနေကြသော ယမ်းအစား သံလိုက်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုသည့် လက်နက်တစ်ခုတီထွင်ရန်သုတေသီများအားဖိတ်ခေါ်သည့်ပေးစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်၊သို့ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်သေနတ်ဟာ လက်နက်အရွယ်အစားကြောင့် အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး Mach 7ထက် အရှိန်များတဲ့ အမြှောက်ဆန်ကို တွန်းကန်နိုင်ဖို့ လျှပ်စွမ်းအင် အများအပြားလိုအပ်ပါတယ်၊
ဥပမာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သုတေသနလုပ်ပြီး ငွေပမာဏ အများအပြားအသုံးပြုလျက်ရှိတာတောင် စစ်သင်္ဘောတွေမှာ တပ်ဆင်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်၊ဒါပေမယ့် တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ၎င်းလျှပ်စစ်သံလိုက်သေနတ်ဟာဆိုရင် ပေါ့ပါးပြီး တင့်ကားများ၌တပ်ဆင်ရန် စွမ်းအင်လုံလောက်မှုရှိလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်၊
လျှပ်စစ်သံလိုက်သေနတ် အတွက် လည်ပတ်ရေးစနစ်နဲ့ သီအိုရီအရ စမ်းသပ်မှုပြုရန် တင်ဒါဖွင့် ‌ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံပိုင် Global Time သတင်းစာမှာကြေညာထားပါတယ်၊ “လက်နက်ဟာ သိပ္ပံ ရုပ်ရှင်တွေထဲကနဲ့ တူညီပေမယ့် စွမ်းအားမြင့် Plasma လက်နက်မဟုတ်ပဲ၊ အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ အမြောက်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်”
ဒါပေမယ့် သံလိုက် Plasma အမြှောက်ဟာ ဘယ်လောက်တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ ?
Global Time ကတော့ တရုတ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ Google မှာရှိနေတဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဟာကို ဖော်ပြထားပါတယ်၊ ဒါကတော့ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာဖြစ်ပါတယ်၊
“ယခုတီထွင်မှုဟာဆိုရင် သံလိုက်Plasma အမြှောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ သံလိုက်စက်ကွင်းကို အမြှောက်ကိုယ်ထည်ပိုက်အတွင်းမှာ စီစဉ်ထားပြီး သံလိုက်စက်ကွင်းရဲ့ ဦးတည်ချက်သည် အမြှောက်ကိုယ်ထည်ကို လိုက်၍ ဝင်ရိုးအတွင်းနံရံမှ သံလိုက်စက်ကွင်းအား တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပါတယ်၊ ပိုက်အတွင်းမှ ဂတ်စ်များသည် ပိုင်းအတွင်း Plasma အလွှာ အဖြစ်ကူးပြောင်းပြီး အပူစီးကူးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အမြှောက်ပိုက်အတွင်း ဖြာထွက်အင်အား လျော့နည်းသွားပြီး ကျည် ထွက်ရန် တွန်းအားက တိုးလာခဲ့ပါတယ်၊အပူခံနိုင်ရည်လည်းတိုးလာပြီး လုပ်ဆောင်မှုသက်တမ်းလည်းတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်”
တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် သံလိုက် Plasma အမြှောက်ဟာ ပါးလွှာခြင်းနဲ့ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးပြီး အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်၊
တရုတ်စစ်တပ်လေ့လာသုံးသပ်သူ Wei Dongxu ကနည်းပညာသစ်ဟာ“ ၁၅၅ မီလီမီတာအလိုအလျောက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ရဲ့ ပစ်အား ကို ၃၀ မှ ၅၀ ကီလိုမီတာ (၁၉ မိုင်မှ ၃၁ မိုင်) အထိ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ(၆၂ မိုင်) အထိတိုးချဲ့နိုင်မယ်”ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ Plasma အလွှာသည် သေနတ်ပြောင်းနှင့်ကျည်များအကြားပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးလက်နက်ကိုပိုမိုတိကျစေပါတယ်၊”
South Florida တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ Dennis Killinger က ၎င်းစိတ်ကူးသည်“ စိတ်ကူးကဖြစ်နိုင်‌ ချေရှိတယ်” လို့ National Interestကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ “ကျွန်‌တော်ရဲ့ အဓိကမေးခွန်းမှာPlasma ၏သက်တမ်းသည် ဘယ်လောက်ကြာရှည်ခံသလဲ ဆိုတာနဲ့ ၎င်း သေနတ်အတွင်းမှလွှတ်တင်မှုအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသလား။ “
၎င်းသည် Railgun နှင့်မတူသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ရိုလာကိုစတာအသစ်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့လီဗာ ကဲ့သို့ မော်တာကို Railgun မှာ အသုံးပြုတာကြောင့် ယခု နည်းလမ်းဟာ Railgun နည်းစနစ်ဟောင်းရဲ့အခွဲ တခုဆိုတာကို သင်တွေးနိုင်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး၊ခုနည်းလမ်းအသစ်ဟာဆိုရင် မူပိုင်ခွင့်ရ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သေနတ်ပြောင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ သံလိုက်စက်ကွင်းကို အသုံးပြုရပါတယ်၊”
Previous Article J20 ကိုယျပြောကျလယောဉျအတှကျ အမရေိကနျနညျးပညာခိုးယူခဲ့တဲ့ တရုတျတို့ ကြေးဇူးတငျရမညျ
Next Article လီမငျဟိုအဂေငျြစီကခြိနျးတှမှေု့ကောလဟာလမြားကိုဆကျလကျငွငျးဆနျခဲ့ပွီး မငျးသားကမညျသညျ့ quarantine စညျးမဉျြးကိုမှခြိုးဖောကျခဲ့ခွငျးမရှိကွောငျးပွောကွား